လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်နိုင်ငံများ၏ အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းများကို ရှင်းကျန်းအစိုးရ ပယ်ချ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း(ဝေဂါ)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Aksu စီရင်စု Awat ကောင်တီ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ခရီးသွားဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်း(ဝေဂါ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစိုးရသည် ၎င်းဒေသတွင် သက်သေ နှင့် အချက်အလက်များမပါရှိဘဲ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန် နှင့်အနောက်နိုင်ငံများ၏ အလိမ်အညာလုပ်ကြံဇာတ်လမ်းများကို အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပယ်ချလိုက်ကြောင်းသည်။
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ၄၈ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် အချို့သော အနောက်နိုင်ငံများက ရှင်းကျန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအမှားများ ၊ ကောလာဟလများ နှင့် အလိမ်အညာများအပေါ် အခြေခံကာ တရုတ်နိုင်ငံအား ဆန့်ကျင်သည့် အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပေကျင်းမြို့၌ ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနှင့်အတူ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Xu Guixiang က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသူများသည် “ ရှင်းကျန်းက လူ့အခွင့်အရေးများ” ဟူသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကို အသုံးချကား တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း Xu က ဆိုသည်။
“ လူ့အခွင့်အရေးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချိုးဖောက်မှုများ” ဟူ၍ ခေါင်းဆောင်စဉ်တပ်ကာ သတင်းအမှားများ ၊ တစ်ဖက်သတ်သတင်းအကြောင်းအရာများအပေါ် တည်ဆောက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအား သိက္ခာချရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Xu က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ ရှင်းကျန်းရှိ အလွှာအသီးအသီးကိုယ်စားပြု ပြည်သူများအား ဗီဒီယိုလင့်မှတဆင့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး ယင်းဒေသအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်နေမှုများ၏ ခိုင်မာသော သက်သေများကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ရှင်းကျန်းအစ္စလာမ်မစ်အင်စတီကျူ့ ဒုတိယဥက္ကဌ Memet Jume နှင့် Kashgar ရှိ Id Kah ဗလီမှ ဗလီဆရာတို့သည် ဗလီ၏ ကဗျည်းမော်ကွန်းကျောက်ပြားကို ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ် “ ရှင်းကျန်းတွင် အစ္စလာမ်များအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ခြင်း” ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် “ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ရှိ ဗလီကဗျည်းမော်ကွန်းကျောက်ပြားဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီ” ဟူသည့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံး၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြသော အလိမ်အညာပိုစ့်တစ်ခုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
သို့သော် အမှန်စစ်စင် ကဗျည်းမော်ကွန်းကျောက်ပြား၏ မူလအစသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပြီး ယင်းအား ပြင်ဆင်မှုအချို့လုပ်ကာ ဗလီဝင်ပေါက်ဝမှ အမိုးအကာဖြင့် လုံခြုံသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် ပင်မ ဝတ်ပြုခန်း၏ နံရံအပြင်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဗလီဆရာက ဆိုသည်။
Aksu နှင့် Hotan စီရင်စုများမှ အများပြည်သူ ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ၎င်းတို့၏ ဘဝအတွေ့အကြုံများ နှင့် အကြောင်းအရာများကို ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတဆင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး “ အတင်းအကြပ်လုပ်အားစေခိုင်မှု” အလိမ်အညာဇာတ်လမ်း အပြင် “ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ” ဟူသည့် အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းကိုလည်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရှင်းကျန်းဒေသည် အကြမ်းဖက်ဝါဒ နှင့် အစွန်းရောက်ဝါဒကို တိုက်ဖျက်ရာ အဓိက စစ်မြေပြင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ရှင်းကျန်းသည် ပဋိပက္ခ နှင့် အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု ထောင်ပေါင်းများစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် လူ့အသက်သေဆုံးမှုများ နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ အပါအဝင် အလှည့်အပြောင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်အတူ ရှင်းကျန်းသည် အဓိကတိုးတက်အောင်မြင်မှုများ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းဒေသတွင် အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများ မပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှာ အချိန် လေးနှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်သည်။
“ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဟာ နိုင်ငံအချို့ရဲ့ ဖန်တစ်ရာတေ သတင်းမှားဖြန့်ဝေမှုနောက်ကို နားမယောင်ကြပါဘူး ” ဟု Xu က ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ၄၈ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် တရုတ်နိုင်ငံအားထောက်ခံကြောင်းကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၆၅ နိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုကာ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင် ၆ နိုင်ငံကလည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်က ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတော်ကြေညာချက်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံအား ထောက်ခံကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးသည် မတူခြားနားလသောနည်းလမ်းများတွင် ရှင်းကျန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ရပ်တည်ချက်ကို ၎င်းတို့၏ နားလည်မှု နှင့် ထောက်ခံမှုကို အတူတကွ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်ဟု Xu က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့အသံများသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ထောက်ခံမှုကို အပြည့်အဝ ဖော်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Xu ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 11 (Xinhua) — The government of Xinjiang Uygur Autonomous Region Monday refuted the lies fabricated by the United States and some other Western countries about human rights in the region with evidence and facts.
They used “human rights in Xinjiang” asapretext to wantonly interfere in China’s domestic affairs, Xu said.
The so-called “mass violations of human rights” claim is built on false information, one-sided stories, and is intended to frame China, said Xu.
Memet Jume, vice president of the Xinjiang Islamic Institute and imam of the Id Kah Mosque in Kashgar, showedaplaque of the mosque, countering the lie posted on the social media account of the U.S. Embassy in China claiming that the “100-year-plus-old plaque” was gone asaresult of the “Chinese government’s suppression of Islam in Xinjiang.”
Relating their own life experiences and stories via video link, representatives from Aksu and Hotan also denounced the lies of the cotton farm “forced labor” as well as “violations of the rights and interests of ethnic minority women.”
“The international community has not been deceived by the cliches spread byafew countries,” said Xu.
Six member states of the Gulf Cooperation Council have also issuedajoint letter supporting China’s position. More than 20 countries have expressed their support to China in their national statements.
Altogether, nearly 100 countries have expressed their understanding and support for China’s policy and position regarding Xinjiang in different ways, Xu noted.
These rational voices fully show the international community’s support, said Xu.
People attendaculture and tourism festival themed on Dolan and Qiuci culture in Awat County of Aksu Prefecture, northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous region, Oct. 25, 2019. (Xinhua/Sadat)